I-China Canton Fair 2020 Autumn, i-China Ngenisa kunye neFektri yokuThumela ngaphandle kunye nabaxhasi | Iqela leHongihai Holding
I-Canton Fair 2020 Autumn, China Ngenisa kunye neThumela ngaphandle
Isakhelo: Yamkela into edibeneyo yesakhelo somthi ukuze igudle utshintsho lwento yombhobho ngenkqubo yokugoba ngemibhobho, ukunciphisa izithuba phakathi kwentsimbi kunye ne-weld phakathi kwemibhobho, ukunqanda uxinzelelo loxinzelelo, amandla aphezulu kunye nokuqina okuqinileyo kwemizi mveliso kwi-weld ngexesha lokucheba;
Masazise ukusuka ngaphambili. Ngoku siyayibona ibhasikithi yangaphambili, ibha yentsimbi ibanzi kakhulu ngokobalo, isakhiwo esomeleleyo kakhulu. Ungayibeka ibhegi yakho okanye isigcina-ntloko kuyo, ulunge kakhulu. Okulandelayo yimfoloko yangaphambili, sinababoneleli babini abaphambili kuyo, ububanzi buyi-φ27mm, yi-hydraulic, sibeka ioyile ye-hydraulic kuyo, ebonelela ukusebenza kakuhle kothuselo, ikwenza ukuba uqhube ukhululekile nakwimeko ezimbi zendlela. Ukwabona u-appreace, kugudileyo kwaye kuqaqambile, kubonakalisa imigangatho yethu ekumgangatho ophezulu. Oku kukhanya kwentloko nokukhanya kokukhanya, zonke zinakoIsiqinisekiso se-EEC. Ubungakanani bofakelo buhambelana neemfuno zeEEC. Nantsi itheyibhile yesixhobo, sinokufumana imisebenzi emininzi yale bhayisikile. Okokuqala ineegear ezi-2, nantsi iqhosha lokukhetha iiyileyiti okanye iRiya yokujika umva. Kwigiya yokudlulisela phambili, kukho iintlobo ezi-3 zesantya ezahlukeneyo oza kulungiswa, nantsi iqhosha lokukhetha isantya esiphezulu, esiPhakathi okanye esisezantsi. Kwaye ukuba sisebenzisa iarhente ejika umva, kuya kubakho isandi sokulumkisa abahambi emva kwakho. Sibona ulwazi ngesantya kwimitha ye-LED, ikwabonisa ulwazi lwebhetri, ulwazi lokukhanya, isantya esikhoyo kunye nolwazi olupheleleyo. Makhe ndikubonise.
Ngoku sihlala esihlalweni, njengoko benditshilo ngaphambili, ikitsi kunye nokubuya umva kunama-ergonomic, Threstened backrest kunye nesihlalo esitrato esinokuqhuba ngokukhululeka. Indawo yokugcina umqhubi nendawo yokubeka i-alamu engasasebenzi, inokukhumbuza abantu ukuba bacime umbane xa behla emotweni, baqinisekise ukhuseleko lomqhubi nabanye. Ngaphantsi kwesihlalo kukho ibhetri, kwaye ibhetri ingama-60V kunye nama-32 AH ebonelela uluhlu olude lwe-50km. Makhe sijonge iingalo, sisebenzisa ityhubhu enye ehlanganisiweyo yokuqinisa, enomeleleyo kwaye yomelele. Ungabona siyila yonke indawo ngokujonga ubomi babantu.Kwi-Canton Fair ekwi-Intanethi
Masishukume siye kwisihlalo esikhwele, inkulu kunesihlalo somqhubi kwaye ifanele inenekazi nomntwana. Nantsi ingcinga yoyilo lomlingo, mandikubonise, Esi sihlalo sigoqiwe ngoku, masiphakamise ityhubhu size siyiveze, emva koko iba sistrikingcle somthwalo, kupholile kakhulu, kunjalo? Leyo yeyona ndawo iphambili yokukhanya kwale moto, inqwelo enye ezimbini, hlawula imali kwimoto enye, kodwa ufumane iimoto ezimbini. Akukho mntu uya kuyala, akunjalo? ICanton Fair 2020
Inxalenye yokugqibela yokumiswa okungasemva, ulwakhiwo lunyakamiso lwentwasahlobo, bonelela ngokukhwela kamnandi. I-axle engemva yenziwa eyethu, sikhetha umthengisi wohlobo oluphambili lwezinto ezisetyenzisiweyo, ukuze umgangatho ulawulwe kakuhle.
Ngoku intshayelelo yale modeli sele igqityiwe, elandelayo lixesha lesimahla, lithuba lakho lokuba usixelele imibuzo kunye neemfuno zakho, ke mna kunye nomncedisi wethu wegary siza kukunika impendulo ngexesha.
Ukulayisha i-capaciI-127th Canton Fair
Kulungile wonke umntu, ufike esiphelweni. Itrakhi yombaneEzona mveliso zethu zibalulekileyo, sinamava acebileyo kwi-R & D nakwimveliso, kwaye sithengise kumazwe angaphezulu kwama-86 emhlabeni. Ukuba ufuna iimveliso zethu, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi, nceda uthumele abafowunelwa bakho apha, umntu osebenza naye uza kuqhakamshelana nawe kwaye akuthumelele ezinye iinkcukacha ngoku.